နှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်ဦးလက်မှတ်လုပ်ဖို့ကဘယ်လို - စကားလုံး - 2019
တစ်ဦးက MS Word document သို့လက်မှတ်ထည့်ပါ
စာသားမ - ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်ဇာတ်လမ်းကိုဖြစ်စေ, မည်သည့်စာသားအားစာရွက်စာတမ်းမှတစ်မူထူးခြားသောကြည့်ပေးနိုငျသောအရာတစ်ခုခုသည်။ Microsoft Word ကို၏ကြွယ်ဝသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုများထဲတွင်တစ်ဦးလက်မှတ်ထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းအဆုံးစွန်သောလက်ကျမ်းစာ၌ရေးထားသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်စေခြင်းငှါလည်းကောင်းသောကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်၌လက်မှတ်ထားရန်အဖြစ်ကစာရွက်စာတမ်းအတွက်အထူးယူထားတဲ့အရပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းငှါအဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းသို့လက်ရေးလက်မှတ်ကိုထည့်သွင်းဖို့, သင်ပထမဦးဆုံးတစျခုဖနျတီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုသင်စက္ကူအဖြူရောင်စာရွက်တစ်ကလောင်နှင့်စကင်နာကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်နှင့် configured လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
2. တစ်စကင်နာနဲ့သူ့ရဲ့လက်မှတ်နှင့်အတူစာမျက်နှာစကင်ဖတ်ခြင်းနှင့်အသုံးအများဆုံးပုံရိပ်ကိုပုံစံများ (JPG, BMP, PNG) ၏တဦးတည်းအတွက်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်သိမ်းဆည်းပါ။
မှတ်ချက်: သင်စကင်နာကိုသုံးပြီးပြဿနာရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, အဲဒါကိုပူးတွဲပါလက်စွဲကိုရည်ညွှန်း, သို့မဟုတ်သင်ကိုလည်းကိရိယာများ configure လုပ်ပြီးအသုံးပြုဖို့အဘို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ရှာတှေ့နိုငျရှိရာထုတ်လုပ်သူရဲ့ website မှာ, သွားရောက်လည်ပတ်။
ကောင်စီ: သင်တစ်ဦးစကင်နာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုပါကကင်မရာနှင့်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ကိုအစားထိုးနိုင်ပါသည်, သို့သော်ဤအမှု၌, သင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေါ်တွင်လက်မှတ်နှင့်အတူစာမျက်နှာစေရန်ခက်ခဲကောင်းတစ်ဦးပါရှိစေခြင်းငှါဆီးနှင်းဖြူကြီးနှင့်အီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်စာမျက်နှာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အထဲကမခံမရပ်ခဲ့ပါဘူး။
3. စာရွက်စာတမ်းအတွက်လက်မှတ်နှင့်အတူပုံတစ်ပုံကိုထည့်ပါ။ သင်ဤလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုသုံးပါ။
4. အများစုကဖွယ်ရှိတစ် Scan ပုံရိပ်လက်မှတ်ပေါ်မှာဖြစ်သည့်အတွက်သာအဧရိယာထွက်ခွာ, ဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်ပုံရိပ်ရဲ့အရွယ်အစားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ဒီအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။
scan ဖတ် 5. ရွှေ့, လှီးဖြတ်ခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းအတွက်ညာဘက်အရပ်ဌာန၌လက်မှတ်နှင့်အတူပုံရိပ်၏တပ်မက်လိုချင်သောအတိုင်းအတာလျှော့ချ။
အတော်လေးမကြာခဏလက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်ပါတယ်သောစာရွက်စာတမ်းများအတွက်လက်မှတ်ပေါင်းအပြင်, သင်အနေအထား, အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်ကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, တစ်ဦး AutoText entry ကိုအဖြစ် Scan လက်မှတ်နှင့်အတူစာသားသတင်းအချက်အလက်သိမ်းဆည်းပါ။
1. အဆိုပါ embedded ပုံသို့မဟုတ်လက်ဝဲ, သင်သူ့ကိုထံမှချင်တဲ့စာသားကိုရိုက်ထည့်ပါ။
2. လက်မှတ်များ၏ပုံရိပ်ကိုအတူ mouse ကိုအသုံးပြုခြင်း, သင်ထည့်သွင်းစာသားကို select လုပ်ပါ။
3. tab ကိုသွားပြီး "ထည့်" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "လျင်မြန်စွာအစိတ်အပိုင်းများ"အုပ်စုတစုအတွက်စီစဉ်ပေး "စာသား".
drop-down menu ကို 4, select လုပ်ပါ "လျင်မြန်စွာအစိတ်အပိုင်းများငွေကောက်ခံဖို့ရွေးချယ်ရေး Save".
ထိုပေးတဲ့ dialog box ကိုမှလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရိုက်ထည့်ပါခုနှစ်တွင် 5. :
ငွေကောက်ခံ - ကို select လုပ်ပါ "AutoText".
6. စာနယ်ဇင်း "အိုကေ" အဆိုပါပေးတဲ့ dialog box ကိုပိတ်လိုက်ပါရန်။
7. Create ပူးတှဲပါသောစာသားနှင့်အတူသင့်ရဲ့စာဖြင့်ရေးသားလက်မှတ်အနာဂတ်အသုံးပြုမှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီတစ်ခု AutoText entry ကိုအဖြစ်သိမ်းဆည်းခြင်း, စာရွက်စာတမ်းထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။
စာသားမနှင့်အတူဖန်တီးသင့်ရဲ့လက်ရေးလက်မှတ်ထည့်သွင်းရန်, သငျသညျဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်က Express ကိုယူနစ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စာရွက်စာတမ်းမှထည့်သွင်းဖို့လိုအပ် "AutoText".
လက်မှတ်ဖြစ်, နှင့် tab ကိုသွားပါသင့်တယ်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းအတွက် 1. ကိုနှိပ်ပြီး "ထည့်".
2. သတင်းထုတ် "လျင်မြန်စွာအစိတ်အပိုင်းများ".
drop-down menu ကို3ကို select လုပ်ပါ "AutoText".
4. ညာဘက် box ထဲမှာပုံပေါ်သောစာရင်းကို Select လုပ်ပါနှင့်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းထဲသို့ paste ။
တစ်ဦး string ကိုလက်မှတ်ထည့်သွင်းခြင်း
တစ် Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းအတွက်လက်ရေးလက်မှတ်အပြင်, သငျသညျကိုလည်းလက်မှတ်တစ်လိုင်းထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောအထူးအခွအေနေအဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်တစ်ခုချင်းစီရာနည်းလမ်းများစွာအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
ပုံမှန်စာရွက်စာတမ်းကွာဟချက်မီးမောင်းထိုးပြနေဖြင့်လက်မှတ် string ကိုထည့်သွင်းခြင်း
အစောပိုင်းကကျနော်တို့အက္ခရာများနှင့်စကားများသူတို့ကိုယ်သူတို့အပြင်, program ကိုသင်တို့ကိုလည်းအလေးပေးပြောကြားနှင့်သူတို့စပ်ကြားနေရာများမှခွင့်ပြု, နှုတ်ကပတ်တော်၌စာသားအအလေးပေးဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်နှင့်။ ရုံလက်မှတ်လိုင်းဖန်တီးရန်, သာနေရာများအလေးပေးပြောကြားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်၌စာသားကိုမဉျြးသား, အလေးအနကျပွောဖို့ကိုဘယ်လို
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်၌ Tab ကို
လက်မှတ်လိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစာရွက်စာတမ်းအတွက် 1. ကိုနှိပ်ပါ။
2. သတင်းထုတ် "TAB" အရာသင်တစ်ဦးလက်မှတ်အဘို့အလိုအရှည်လိုင်းပေါ်တွင် မူတည်. တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိမ်။
3. အုပ်စုထဲမှာ "pi" နဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် Non-print ထုတ်လို့ရတဲ့ဇာတ်ကောင်များ၏ Display ကို mode ကို Turn "Passage"tab ကို "အိမ်".
4. အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ရမည်ဖြစ်သည်သောဇာတ်ကောင်သို့မဟုတ် tabs များရွေးချယ်ပါ။ သူတို့ဟာသေးငယ်တဲ့မြှားအဖြစ်ပြသထားပါသည်။
5. သင့်လျော်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှု Perform:
စာနယ်ဇင်းများ "CTRL + ဦး" သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဟုဦး"အုပ်စုတစုအတွက်စီစဉ်ပေး "စာလုံး" tab ကို "အိမ်";
underscore ၏စံပုံစံ (တဦးတည်းလိုင်း) လျှင်သင်ကျေနပ်မှုမဟုတ်, တစ်ဦးပေးတဲ့ dialog box ကိုဖွင့်လှစ် "စာလုံး"အုပ်စုများ၏အနိမ့်ပိုင်ခွင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်နည်းနည်းမြှားအပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, ထိုအပိုင်းအတွက် line သို့မဟုတ်လိုင်းများသင့်လျော်သောစတိုင်ကို select "အောက်လိုင်းတား".
တစ်ဦးလက်မှတ်တစ်လိုင်း - သင်နေရာများ (tabs များ) ကို install ရှိသည်ဟုဆိုက်တွင် 6. တစ်ဦးအလျားလိုက်လိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
7. display ကို mode ကိုကြားနေရာလွတ်ပိတ်ထားပါ။
ဝဘ်စာရွက်စာတမ်းကွာဟချက်တစ်ခု underscore ကလက်မှတ်တစ်လိုင်းကိုထည့်သွင်းခြင်း
သငျသညျစာရွက်စာတမ်းပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်မဟုတ်အလေးပေးနှင့်ဝဘ်ပုံစံသို့မဟုတ်ဝဘ်စာရွက်စာတမ်းအတွက်ကလက်မှတ်လိုင်းဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါက, သာအနိမ့်နယ်နိမိတ်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်စားပွဲတစ်ခုကလာပ်စည်းကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပေသည်။ သူမတစ်ဦးလက်မှတ်တစ်လိုင်းအဖြစ်ပြုမူလိမ့်မည်။
သင်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းသို့စာသားကိုရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်တစ်ဦး underscore လိုင်းအရပျ၌တည်နေကြလိမ့်မည်ဆက်ပြောသည်။ လိုင်းဥပမာအနေနဲ့မိတ်ဆက်စာသားကိုဖြင့်လိုက်ပါသွားနိုင်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ကဆက်ပြောသည်, "နေ့စွဲ", "လက်မှတ်".
သင်တစ်ဦးလက်မှတ်လိုင်းထပ်ထည့်ချင်တယ်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းအတွက် 1. ကိုနှိပ်ပါ။
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 2. "ထည့်" စာနယ်ဇင်းများ "စားပွဲတင်".
4. စာရွက်စာတမ်းအတွက်အလိုရှိသောတည်နေရာဖို့ကဆက်ပြောသည်ဆဲလ်ရွှေ့နှင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးလိုချင်သော size ကို string ကိုအဆိုအရ၎င်း၏အရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်။
5. စားပွဲပေါ်မှာ right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "နယ်ခြားမဲ့နှင့်အရိပ်".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်ခုနှစ်တွင်6နဲ့ tab မှ navigate "နယ်စပ်ရေးရာ".
7. ပုဒ်မ "အမျိုးအစား" ကို select "အမှတ်".
8. ပုဒ်မ "စတိုင်" လက်မှတ်များအတွက်ဆန္ဒရှိလိုင်းအရောင်လိုင်းအမျိုးအစား, အထူကိုရွေးချယ်ပါ။
9. ပုဒ်မ "နမူနာ" အဆိုပါအမှတ်အသားများအကြားကိုကလစ်နှိပ်ပါသာအောက်ခြေနယ်စပ်ဖော်ပြရန်ဇယားအပေါ်အောက်ခြေလယ်ကိုဖော်ပြရန်။
မှတ်ချက်: နယ်နိမိတ်ပြောင်းလဲမှုများရိုက်ပါ က "Other"အဲဒီအစားယခင်ကရှေးခယျြထား၏ "အမှတ်".
10. ပုဒ်မ "ကို Apply" ကို select "စားပွဲတင်".
11. စာနယ်ဇင်း "အိုကေ" ပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ရန်။
မှတ်ချက်: တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းပုံနှိပ်နေစဉ်စာရွက်ပေါ်တွင်ပြသလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမမီးခိုးရောင်လိုင်းများနှင့်အတူ tab ကိုစားပွဲပေါ်မှာဖော်ပြရန် "Layout" (အပိုင်း "စားပွဲနှင့်အလုပ်လုပ်") ကိုရွေးချယ်ပါ "Show ကို Grid"ယင်းအပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်ဘယ်ဟာ "စားပွဲတင်".
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း print ထုတ်လုပ်နည်း
လက်မှတ်လိုင်းများအတွက်ပူးတှဲပါစာသားထဲမှာ line ကိုထည့်ပါ
ဤနည်းလမ်းကိုသင်တစ်ဦးလက်မှတ်လိုင်းထပ်ထည့်, ဒါပေမယ့်လည်းအဲဒါကိုဘေးကရှင်းလင်းစာသားကိုညွှန်ပြခြင်းငှါမသာရှိသည်ဘယ်မှာသူတွေကိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအတွက်အကြံပြုသည်။ ဤသည်စာသားစကားလုံးက "လက်မှတ်", "နေ့စွဲ", "အမည်", အနေအထားနှင့်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာတစ်ဦး string ကိုနဲ့အတူဒီစာသားနဲ့လက်မှတ်သူ့ဟာသူ, တူအဆင့်မှာဖြစ်ကြောင်းအရေးကြီးပါသည်။
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်၌စာရင်းပေးသွင်းမှုနှင့် Superscript, တံဆိပ်များထည့်ပါ
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 2. "ထည့်" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စားပွဲတင်".
3.2x ကို 1 (နှစ်ခုကော်လံ, တလိုင်း) ၏စားပွဲပေါ်မှာအရွယ်အစားထည့်ပါ။
လိုအပ်ခဲ့လျှင်4စားပွဲပေါ်မှာ၏တည်နေရာကိုပြောင်းလဲပါ။ အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာလက်ကိုင်ပေါ်ဆွဲကအရွယ်အစားပြောင်းပါ။ ယင်း (ကာရှင်းလင်းစာသား) ပထမဆဲလ်၏အရွယ်အစားနှင့်ဒုတိယ (လက်မှတ်လိုင်း) Adjust ။
5. ဆက်စပ် menu ကနေ, စားပွဲပေါ်မှာ Right-click "နယ်ခြားမဲ့နှင့်အရိပ်".
ယင်းကို select လုပ်ပါနဲ့ tab ပေးတဲ့ dialog box ကိုခုနှစ်တွင် 6. "နယ်စပ်ရေးရာ".
အပိုင်း7"အမျိုးအစား" ကို select "အမှတ်".
8. ပုဒ်မ "ကို Apply" ကို select "စားပွဲတင်".
9. စာနယ်ဇင်း "အိုကေ" အဆိုပါပေးတဲ့ dialog box ကိုပိတ်လိုက်ပါရန်။
10. ထိုအရပ်၌ဒုတိယဆဲလ်ထဲမှာကြောင်း, လက်မှတ်တစ်လိုင်းဖြစ်, ပြီးတော့ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ရာအရပ်တွင်စားပွဲ right-click "နယ်ခြားမဲ့နှင့်အရိပ်".
အဆိုပါ tab ကိုမှ 11 Go ကို "နယ်စပ်ရေးရာ".
12. ပုဒ်မ "စတိုင်" သင့်လျော်သောလိုင်းအမျိုးအစား, အရောင်နဲ့အထူကိုရွေးပါ။
13. ပုဒ်မ "နမူနာ" စားပွဲသာအနိမ့်နယ်စပ်မြင်နိုင်စေရန်အောက်ခြေလယ်ပြင်ပေါ်တွင်ပြသသောအမှတ်အသားပေါ်တွင် Click - ကလက်မှတ်တစ်လိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
14. ပုဒ်မ "ကို Apply" ကို select "ဆဲလ်"။ စာနယ်ဇင်းများ "အိုကေ" ပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ရန်။
15. (အောက်ဆုံးလိုင်းအပါအဝင်ယင်း၏နယ်နိမိတ်, ပြသမည်မဟုတ်ပါ) ကိုစားပွဲ၏ပထမဦးဆုံးဆဲလ်အတွက်လိုအပ်သောရှင်းလင်းစာသားကိုရိုက်ထည့်ပါ။
မှတ်ချက်: အဆိုပါမီးခိုးရောင်, သင်ဖန်တီးထားသောစားပွဲပေါ်မှာဆဲလ်လိုက်သည်နယ်စပ် dashed ပုံနှိပ်မရနိုင်ပါ။ ဝှက်ထား, ဒါမှမဟုတ်, ကဝှက်ထားသောလျှင်ဆန့်ကျင်, display ကိုအပေါ်, ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့ "နယ်ခြားမဲ့"အုပ်စုတစုအတွက်စီစဉ်ပေး "Passage" (tab ကို "အိမ်") ထို select လုပ်ပါ "Show ကို Grid".
ဆိုလိုသည်မှာယခုသင်တစ်ဦးဟာ Microsoft Word document တစ်ခုလက်မှတ်ထားရန်သူအပေါင်းတို့ကိုဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုသိကပါပဲ။ ဤသည်ဖြစ်စေလက်-တိကျမ်းစာ၌လာသည်လက်မှတ်ဖြစ်နိုင်ပြီး, လိုင်းတစ်ခုပြီးသားပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းအပေါ်ကို manually စာတန်းများကိုထည့်သွင်းဖို့။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်လက်မှတ်များအတွက်လက်မှတ်သို့မဟုတ်နေရာတစ်နေရာကြှနျုပျတို့လညျးသငျသညျပွောပွီကြောင်းထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းတစ်ဦးရှင်းလင်းစာသားကိုဖြင့်လိုက်ပါသွားနိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: Top 15 Advanced Excel 2016 Tips and Tricks (သြဂုတ်လ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © စကားလုံး 2019